UltraSMSScript: एक पूर्ण एसएमएस, MMS, र API मार्फत भ्वाइस मार्केटिंग प्लेटफार्म किन्नुहोस् Martech Zone
एक पाठ सन्देश रणनीति शुरू एक कठिन कार्यान्वयन प्रक्रिया हुन सक्छ। यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, क्यारियरहरू आज पनि ठूलो रूपमा म्यानुअल छन् ... कागजी कार्यहरू सबमिट गर्नुहोस्, तपाईंको डाटा रिटेन्सन र गोपनीयता नीतिहरू समीक्षा गरिएको छ, एसएमएस अनुमतिहरूमा साइन आउट गर्नुहोस्। म यो माध्यमसँग अनुपालनको महत्त्वलाई कम महत्त्व दिँदै कोशिस गर्दैछु, तर एसएमएस समाधानलाई सार्ने वा एकीकृत गर्ने हताशा अनुमति-आधारित, वैध मार्केटरको लागि काफी निराश हुन सक्छ।
एसएमएस मार्केटिंगको लागि प्रक्रिया सामान्यतया एकदम जटिल हो। अधिकतर एसएमएस प्लेटफार्महरू, उदाहरणका लागि, गर्नुहोस् छैन संवाद र सिधा एसएमएस क्यारियर संग एकीकृत। त्यहाँ सामान्यतया एक एसएमएस मार्केटिंग वा संचार प्लेटफर्म हो जुन सेवासँग सञ्चार गर्दछ जुन त्यसपछि सन्देश गेटवेमा जडान हुन्छ जसले त्यसपछि सन्देश वाहकमा पठाउँदछ।
जबकि एसएमएस प्लेटफर्म आश्चर्यजनक हुन सक्छ, तिनीहरू एसएमएस सन्देश गेटवेमा निर्भर छन् आफ्नो प्रणालीको लागि। मूल्य निर्धारण दृष्टिकोणबाट यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईं आफ्नो सफ्टवेयरको लागि भुक्तानी गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो प्लेटफर्ममा सन्देश शुल्कको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ, तपाईंले थप कुञ्जी शब्दहरू प्राप्त गर्न भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यसपछि ती सन्देश गेटवेमा सन्देश शुल्कको लागि तिर्ने छन्। एसएमएसको लागत द्रुत रूपमा विस्फोट गर्न सक्छ ... विशेष गरी जब उपभोक्ताहरूले अधिक बारम्बार एसएमएस अपनाईरहेका छन् व्यवसायसँग अन्तर्क्रिया गर्न।
गत वर्षको अन्त्य सम्ममा 48.7 70..82 मिलियन उपभोक्ताहरूले स्वेच्छाले आफ्नो मनपर्ने ब्रांडबाट एसएमएस संचार प्राप्त गर्न रोजेका छन्। Consumers०% उपभोक्ता सोच्छन् कि एसएमएस मार्केटिंग व्यवसायका लागि उनीहरूको ध्यान प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका हो। Of२% मानिसहरु आफूले प्राप्त गरेका हरेक पाठ सन्देश खोल्न भन्छन्।
लरेन पोप, SMS 45 एसएमएस मार्केटिंग तथ्या Your्क तपाईंको ग्राहकहरू तपाईंलाई थाँहा दिनुहोस्
त्यहाँ केही अविश्वसनीय रूपमा मजबूत र सस्तो एसएमएस गेटवेहरू छन् जुन तपाईं दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र सीधा मजबूत एपीआई मार्फत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, समावेश सहित Twilio, Plivo, Telnyx, SignalWire, Nexmo, Ytel, र ब्यान्डविथ। यी प्लेटफर्महरूसँग सफ्टवेयर डेभलपर किटहरू छन् जुन मद्दत गर्नको लागि मद्दत पुर्‍याउने एपीआईहरू तपाईंको एसएमएस प्लेटफर्म वा एकीकरणको विकास गर्न मद्दतको लागि जुन तपाईं चाहानुहुन्छ। दुर्भाग्यवस, यद्यपि, यसलाई विकास विशेषज्ञता, पूर्वाधार, र चलिरहेको रखरखाव आवश्यक छ।
UltraSMSScript: किन्नुहोस् र अनुकूलन गर्नुहोस् तपाईंको आफ्नै एसएमएस सन्देश प्लेटफार्म
तपाईको आफ्नै एसएमएस मेसेजिंग प्लेटफर्मको विकास गर्न वा अनलाइन प्लेटफर्ममा मासिक इजाजतपत्र शुल्क तिर्न कम महँगो विकल्प कोड खरिद गर्नु हो र यसलाई आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चलाउनु हो। यसले तपाईंलाई उठ्न र छिटो चल्नको लागि मद्दत गर्दछ साथै तपाईंको प्लेटफर्म अनुरूप, सुरक्षित, र स्थिर छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ। UltraSMSScript एपीआईको साथ एक सेतो लेबल सफ्टवेयर हो जुन तपाईं आफैंलाई खरीद गर्न र स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि कुनै एसएमएस गेटवेका लागि प्रयोग गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै चालु शुल्क छैन र तपाईं अधिक किफायती एसएमएस सन्देश शुल्क तिर्नुहुन्छ किनकि तपाईं सिधै गेटवेसँग काम गरिरहनु भएको छ।
UltraSMSScript सुविधाहरू समावेश गर्दछ
मोबाइल कूपन - तपाइँको ग्राहकहरु लाई पठाउन सुन्दर मोबाइल कूपन बनाउनुहोस्। तिनीहरू एक उत्तम तरीका हो एक वफादार ग्राहक आधार बनाउने जबकि तपाईंको वर्तमान ग्राहकहरुलाई पुरस्कृत। प्रत्येक कुपन पूर्ण रूपमा अनुकूलन योग्य छ र धेरै सेटिंग्स र सुविधाहरू समावेश गर्दछ तपाईंलाई लचिलो बनाउन अनुमति दिनुहुन्छ तपाईं कसरी तिनीहरू सेट अप गर्न चाहनुहुन्छ।
Q&A SMS Bots - स्वचालित एसएमएस प्रश्न र प्रतिक्रियाहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन किवर्डमा टेक्स्ट गरेर लात निकालिएको छ। तपाईले चाहानु भएको अनुक्रममा धेरै प्रश्नहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राहक समर्थन, क्विजहरू, बहुमूल्य प्रतिक्रिया स gathering्कलन गर्न, र तपाईंको सूची बढाउनको लागि महान।
थोक एसएमएस पठाउनुहोस् - एक एसएमएस मार्केटिंग अभियानको मुटुमा तपाईंको ग्राहकहरूलाई बल्कमा एसएमएस सन्देशहरू पठाउने क्षमता हो। एक पटकमा १ समूह वा बहु समूहमा पठाउनुहोस्! तपाईका ग्राहकहरुलाई डिलहरु वा छुटको घोषणा गर्न सन्देश पठाउनुहोस् जुन तपाई बढुवा गर्न चाहानुहुन्छ जुन ठूलै व्यवसायमा ल्याउन सक्छ।
असीमित मोबाइल कीवर्डहरू कुञ्जी शव्द मार्केटिंगमा सामेल हुने प्रयोगकर्ताहरूको क्षमता। मोबाइल कुञ्जी शव्दहरू निश्चित मार्केटमा अपील गर्नको लागि मोबाइल मार्केटिंग अभियानको एक तत्व हुन्। तपाईं असीमित किवर्डहरूमा पहुँच पाउनुहुनेछ! व्यक्तिले तपाइँको पाठ मार्केटिंगको लागि कुञ्जीशब्दमा टेक्स्ट गरेर साइन अप गर्न सक्दछ।
थोक एसएमएस तालिका - अन्तरालमा सन्देशहरूको समय तालिका एक उत्तम तरिका हो यो सुनिश्चित गर्न को लागी तपाइँको ग्राहकहरु बिर्सनु हुनेछैन। हाम्रो स्क्रिप्टले तपाईंलाई एसएमएस सन्देशहरू पठाउँदा पूर्ण नियन्त्रणको लागि अनुमति दिन्छ ताकि तपाईं सन्देशहरू महीनाहरू अघि नै शेड्यूल गर्न सक्नुहुनेछ।
स्वत: जवाफ - एक व्यक्ति तपाईंको ग्राहक सूचीमा सामेल भएपछि, तिनीहरूलाई स्वचालित रूपमा तिनीहरूलाई अनुकूलन सन्देश फिर्ता पठाउनुहोस्। तपाईं स्वत: जवाफदाता सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ स्वचालित रूपमा एसएमएस पठाउनका लागि उपभोक्ताहरू पछि प्रिसेट तालिकामा सदस्यता लिए पछि धेरै ईमेल अटोरेस्पोन्डरहरूको काममा।
MMS / चित्र सन्देश पठाउनुहोस् - MMS ले तपाईंको ग्राहकको सञ्चारमा ईमेलको राम्रो र अत्यावश्यक सन्देश ल्याउँछ। लगभग १००% खुला दरहरू र द्रुत प्रतिक्रिया समयको साथ, हरेक मोबाइल फोनमा रिच मिडियाको साथ पूरै तस्वीर रंग्नुहोस्।
२-वे SMS कुराकानी - २-मार्ग SMS कुराकानीले तपाईंलाई वा तपाईंको ग्राहक सेवा विभागलाई तपाईंको मोबाइल ग्राहकहरूसँग, SMS मार्फत जडान गर्दछ। बहुमूल्य प्रतिक्रिया इकट्ठा गर्नुहोस् र तपाईंको ग्राहकहरूसँग २-मार्ग सडकमा सञ्चार गर्नुहोस्, सबै इन्स्ट्यान्ट मेसेन्जर ईन्टरफेसको साथ SMS मार्फत!
उप-खाताहरू - टोली सदस्यहरू छन् कि तपाईं प्लेटफर्मको बिभिन्न मोड्युलहरूमा काम प्रत्यायोजित गर्न चाहनुहुन्छ र केवल तिनीहरूलाई विशेष सुविधाहरूमा पहुँच दिन? तपाईं हाम्रो उप-खाताहरूको साथ यो गर्न सक्नुहुन्छ!
पुनरावर्ती सन्देशहरू - एक आवर्ती आधारमा सन्देशहरूको श्रृंखला अनुसूची गर्न आवश्यक छ? तपाईं घटनाहरू दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, र वार्षिक दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ र ती तालिकाबद्ध घटनाहरूको फ्रिक्वेन्सी (हरेक दिन, प्रत्येक दोस्रो दिन, प्रत्येक 2th औं दिनमा, हप्तामा एक पटक, हरेक २ हप्ता, आदि ...)
एसएमएस प्रतियोगिताहरू - तपाइँको हालको ग्राहकहरु लाई संलग्न गर्न को लागी एक तरीकाको रूपमा SMS प्रतियोगिता सिर्जना गर्नुहोस् र यसलाई तपाइँको सूची बढाउनको लागि एक उत्तम उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्दै। तपाईको ग्राहकहरुलाई खुसी राख्नु र उही समयमा तपाईको सूची बढाउनु भन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छैन!
जन्मदिन एसएमएस शुभकामना - सजिलै सँग आफ्नो सम्पर्कहरूको जन्मदिन संकलन गर्नुहोस् जब तिनीहरूले तपाईंको सूचीको सदस्यता लिन्छन्। त्यसो भए, तिनीहरूको जन्मदिन वा केही दिन अघि निश्चित मात्रामा, हाम्रो प्रणालीले तिनीहरूलाई स्वचालित रूपमा तपाइँको जन्मदिनको पाठ सन्देश पठाउँनेछ।
फेसबुक एकीकरण - तपाईंको फेसबुक पृष्ठमा तपाईंको सन्देश साझा गर्न क्षमता! शब्द फैलाउनुहोस् र तपाईंको फेसबुक खातामा तपाईंको सन्देशहरू साझा गरेर तपाईंको ग्राहकहरू बढ्ने क्षमता दिँदै तपाईंको प्रशंसकहरू बीच सहभागिता बढाउनुहोस्।
थोक एसएमएस डिलिवरी तथ्या .्क - विस्तृत तथ्या View्कहरू हेर्नुहोस् जस्तै सफल सन्देशहरूको #, असफल सन्देशहरूको #, सन्देश असफल भएको कारण, र प्रयोगकर्तालाई सूचीबाट कुनै पनि सदस्यताहरू मेटाउन अनुमति दिनुहोस् जुन सन्देशहरू प्राप्त गर्न असफल भएका छन्।
विस्तृत अभियान एनालिटिक्स - तपाइँको अभियानहरुलाई गहिरो हेराई लिनका लागि कुन कुञ्जी शव्दहरूले उत्तम, विस्तृत एसएमएस लगहरू, र नयाँ ग्राहकहरू र सदस्यताहरूको समय अवधिमा प्रदर्शन गरिरहेछन् भनेर ट्र्याक गर्नुहोस्।
वेबसाइट साइनअप विजेट - सम्भावित ग्राहकहरुलाई एक वेब आधारित फर्म मार्फत एक एसएमएस मार्केटिंग सूचीमा शामिल हुन अनुमति दिनुहोस् जुन वेबसाइटमा राखिएको छ। यो नयाँ उपभोक्ताहरु लाई आकर्षित गर्न र आकर्षित गर्न अझै लागत लागत प्रभावी अवसर प्रदान गर्दछ।
SMS सर्वेक्षणहरू - तपाइँको ग्राहकहरुलाई व्यस्त राख्न र तपाइँको प्रस्तावमा चासो राख्नुका साथै पाठ्यपुस्तक मतदान गर्न पोलहरू सिर्जना गर्नुहोस् साथै बहुमूल्य जानकारी स collect्कलन गर्नुहोस् र उनीहरूले तपाइँबाट के चाहान्छन् र के चाहिन्छ भन्ने बारे अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नुहोस्।
मोबाइल स्प्लैश पृष्ठ बिल्डर - प्रयोगकर्ता, जो भिडियो, छविहरू, वा कुनै HTML का साथ आफ्नै पृष्ठहरू सिर्जना गर्न चाहान्छन् र ती पृष्ठ URL हरू तिनीहरूको ग्राहक सूचीमा बाहिर पठाउनका लागि उत्तम छ। पूर्ण सुविधात्मक HTML सम्पादकबाट सुसज्जित।
नियुक्ति अनुस्मारकहरू - अनुसूची र आफ्नो ग्राहकहरु लाई नियुक्ति अनुस्मारकहरु पठाउनुहोस् उनीहरूले आफूले गरेको एपोइन्टमेन्टको बारेमा भुल्दैनन् भनेर सुनिश्चित गर्दै तपाईंको सम्पर्क खोजी गर्नुहोस् तब सजीलै एसएमएस तालिकामा तिनीहरूलाई बाहिर जानुहोस्।
अन्तर्निर्मित लिंक छोटो पार्ने र ट्र्याकिंग - तपाइँसँग तपाइँको लिंक छोटो पार्ने विकल्प छन ता कि तिनीहरूले तपाइँको टेक्स्ट सन्देशहरूमा धेरै वर्णहरू लिदैनन् र तपाईको सन्देश कत्तिको प्रभावकारी रहेछ भनेर हेर्न दिइएको लि link्कका लागि कति क्लिकहरू बनाइएको थियो भनेर पनि ट्र्याक गर्दछ। एक धेरै उपयोगी सानो उपकरण!
स्थानीय संख्या - बहुमूल्य प्रतिक्रिया लिनुहोस् र स्थानीय पहिचान योग्य फोन नम्बरहरूबाट सञ्चारलाई २-मार्ग सडक बनाउनुहोस्! प्रयोगकर्ता खातामा बहु स्थानीय नम्बरहरू थप्नुहोस्। फोन नम्बरको पोखरीबाट पठाइएको सन्देशहरू पठाउनुहोस्।
ईमेल अलर्टहरू - नयाँ ग्राहक ईमेल सचेतहरू पाउँदछन् वा दैनिक सारांशमा। साथै, कम क्रेडिट ब्यालेन्स ईमेल सचेतहरू प्राप्त गर्नुहोस् ता कि तपाईं सँधै सचेत हुनुहुनेछ तपाईंको क्रेडिट फेरि कहिले भर्ने भनेर।
सन्देश टेम्प्लेटहरू - साधारण वा प्राय: प्रयोग भएको एसएमएस सन्देश बचत गर्नुहोस् ताकि तपाईले उही सन्देशलाई बारम्बार पुनः प्रविष्ट गर्नुपर्दैन। केवल कुन टेम्पलेट को उपयोग गर्ने को छनौट गर्नुहोस् र यो तपाइँको लागी सन्देश पपुलेट गर्नुहोस्।
फोनबाट प्रसारण - दौडमा? केहि समस्या छैन! तपाईंसँग साधारण एसएमएस सन्देशको साथ तपाईंको एसएमएस मार्केटिंग अभियानलाई विस्फोट गर्न सक्ने क्षमता छ! यो प्रक्रिया प्रबन्ध गर्नका लागि तपाईको खातामा लग इन गर्न आवश्यक पर्दैन।
QR कोडहरू - क्यूआर कोड उत्पन्न गर्नुहोस् तपाईंको अनलाइन माध्यम मार्फत अभियान अनलाइन माध्यममा पुल गर्नको लागि। हाम्रो सफ्टवेयर नयाँ ग्राहक र वेब पृष्ठ URL QR कोडको साथ सुसज्जित छ।
तपाईंको सम्पर्कहरू खण्ड गर्नुहोस् - हाम्रो समूह विभाजन समारोहको साथ, तपाईं सजिलै आफ्नो पाठ मार्केटिंग सूची भित्र समूह बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको सम्पर्कहरूलाई समूहहरूमा व्यवस्थित गर्दछ र तपाईंलाई तपाईंको सबै ग्राहकहरूलाई व्यवस्थित राख्न अनुमति दिन्छ र तिनीहरू कहाँबाट आउँदैछन्!
आवाज प्रसारण - एक भ्वाइस सन्देश तपाईंको सम्पर्कहरूमा प्रसारण गर्नुहोस्! कि त एक सन्देशमा टाइप गर्नुहोस् र प्रणाली पाठलाई आवाजमा रूपान्तरण गर्दछ, वा MP3 फाइल मार्फत तपाईंको आफ्नै सन्देश अपलोड गर्दछ। कुराकानी गर्न एक अर्को उत्तम तरीका र तपाइँको सम्पर्कहरुलाई तपाइँको प्रस्तावहरुमा व्यस्त राख्न।
तपाईंको ग्राहक सूचि अपलोड गर्नुहोस् - तपाइँ अपग्रेड गर्न चाहानु भएको अरू कतैबाट अप्ट-इन SMS सूची छ? तपाईका ग्राहकहरुबाट स्पष्ट लिखित सहमति छ कि तिनीहरु तपाईबाट सन्देश प्राप्त गर्न सहमत छन् तपाईले आफ्नो सूची पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो प्रक्रियालाई अविश्वसनीय रूपमा सजिलो बनायौं!
भ्वाइसमेल / कल फर्वार्डिंग - भ्वाइसमेल र कल अग्रेषण क्षमता। तपाईंको कलहरू सिधै भ्वाइसमेलमा जानको लागि विकल्प छ, जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई नियन्त्रण प्यानल भित्र सुन्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईंको कलहरू आफूले चाहेको कुनै पनि नम्बरमा फर्वार्ड गर्नुहोस्!
एसएमएस ईमेल / एसएमएस को ईमेल - जब तपाइँको अनलाइन नम्बरमा कसैलाई पाठ पठाउँदा ईमेल सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहोस् (ईमेलमा एसएमएस)। तपाईं त्यसपछि तपाईंको ईमेल क्लाइन्टबाट ईमेलमा सीधा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ, प्रणालीले त्यो ईमेल लिनेछ, र तिनीहरूलाई पाठ पठाउँनेछ (SMS लाई ईमेल)। एक महान र धेरै उपयोगी उपकरण!
नाम र ईमेल क्याप्चर - तपाईंको अप्ट-इन सूचीमा सामेल हुने नयाँ ग्राहकबाट नाम र ईमेल संकलन गर्न विकल्प छ! नामहरू संकलन गर्नुहोस् तपाईंको एसएमएस सन्देशहरू र ईमेलहरूलाई निजीकृत गर्न यदि तपाईं तिनीहरूलाई ईमेल मार्केटिंग अभियानको साथ प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ भने।
सम्पर्क व्यवस्थापन - सम्पर्क व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्न धेरै सरल जुन तपाईंको सम्पर्कहरू / ग्राहकहरू समावेश गर्दछ। यहाँ खोज्नुहोस् र तपाईंको सबै सदस्यहरूलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्।
SMS पंच कार्ड वफादारी पुरस्कार - ती पुरातात्विक र अक्सर गलत कागज पंच कार्डहरु बिर्सनुहोस्। एसएमएस प्रस्ताव "पंच कार्ड" तपाइँको ग्राहकहरु लाई वफादारी पुरस्कार र तपाइँको ब्रान्ड मा बफादारी निर्माण ग्राहकहरु लाई खुसी राख्न र फिर्ता आउन।
किओस्क बिल्डर - एक डिजिटल वफादारी कियोस्क एक अत्याधुनिक उपकरण हो जसले तपाइँलाई प्रयोग गर्न सजिलो किओस्क डिस्प्ले सिर्जना गर्न दिन्छ। यसले तपाईंको साइटमा ग्राहकहरूलाई प्रयोगकर्ता-अनुकूल प्रदर्शन प्रदान गर्दछ - तिनीहरूलाई मोबाइल क्लबमा सामेल हुन, एक वफादारी कार्यक्रममा चेक इन गर्न, र तिनीहरूको हालको स्थिति जाँच गर्न।
एपीआई - API को माध्यमबाट UltraSMSScript प्लेटफर्मको धेरै मुख्य सुविधाहरू पहुँच गर्नुहोस्। तपाईंको अनुप्रयोगमा UltraSMSScript एपीआई एकीकृत गर्दा तपाईंलाई आफ्नै अनुप्रयोगमा प्लेटफर्मको कार्यक्षमता विस्तार गर्न सक्षम गर्दछ!
ईमेल एकीकरण - यदि ईमेल क्याप्चर अन गरिएको छ भने, स्वचालित रूपमा ईमेलहरू तपाईंको मनपर्ने ईमेल सेवा जस्तै मेलचिम्प, aWeber, GetResponse, ActiveCamp अभियान, वा Sendinblue मा थप्नुहोस्! सबै पर्दा पछाडि मूल रूपमा ह्यान्डल गरियो।
अनलाइन फ्याक्स - UltraSMSScript र एक फ्याक्स मेशिन बीच फ्याक्सहरू पठाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस्! फ्याक्सि ofको म्यानुअल, अफलाइन प्रक्रिया माइग्रेट गर्नुहोस् र फ्याक्सि documents कागजातहरूलाई सफ्टवेयर अनुभवमा बदल्नुहोस् जबकि व्यवसायलाई पुरानो लिगेसी हार्डवेयरबाट टाढा लैजाने अधिक लचिलोपना प्रदान गर्दै।
डबल अप्ट-इन - वैकल्पिक डबल अप्ट-इन क्षमता जुन सक्षम गरियो भने, व्यक्तिले उनीहरूलाई "Y" को साथ उनीहरूको सदस्यता पुष्टि गर्न एक अतिरिक्त पाठ सन्देश प्राप्त गर्नेछन्। डबल अप्ट-इन अनिवार्य छैन, जे होस्, यो तपाईंलाई विशेष सन्देशहरूमा पठाइने संदेशहरूको सामग्रीमा निर्भर गर्दछ।
को इनकोड गरिएको संस्करणका लागि PHP स्क्रिप्ट, तपाईले सबै स्रोत कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईलाई फ्रन्ट-एन्ड डिजाईन एलिमेन्ट्स परिवर्तन गर्न अनुमति दिन यदि तपाई यसलाई चाहानुहुन्छ जुन तपाईले चाहानु भएको जस्तो देखिन्छ। जे होस्, धेरै जसो कोर ब्याक-एन्ड फाईलहरू ईन्कोड हुन्छन्। UltraSMSScript उपयोगहरु ioncube ईन्कोड गर्न र फाइलहरू लाईसेन्स गर्न। धेरैजसो होस्टिंग कम्पनीहरूसँग पहिले नै आयनक्यूब लोडर स्थापना र सक्षम छ किनकि आयनक्युब संवेदनशील फाइलहरूको सुरक्षाको लागि उद्योग मानक हो। स्क्रिप्टको लेभल & र उल्ट्रा प्याकेजहरूका लागि तपाईले सोर्स कोडको १००% प्राप्त गर्नुहुनेछ र अवश्य पनि तपाईले एउटा पुन: बिक्रि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो कि तपाईले वास्तविक स्क्रिप्टलाई पुन: बेच्ने छैन भनेर बताउनुहुन्छ।
अब UltraSMSScript खरीद गर्नुहोस्!
टैग: AWeberथोक एसएमएसकल फर्वार्डिंगएसएमएसमा ईमेल गर्नुहोस्GetResponseलिंक छोटो पार्दैस्थानीय एसएमएस संख्याmailchimpएमएमएसअनलाइन फ्याक्सPHP लिपिQR कोडहरूपठाउनुस्एसएमएस एनालिटिक्सएसएमएस अटोरेस्पोन्डरएसएमएस बोटएसएमएस कुराकानीएसएमएस सम्पर्कहरूएसएमएस कुपनहरूएसएमएस कीवर्डहरूएसएमएस कियोस्कएसएमएस वफादारी कार्यक्रमएसएमएस पोलएसएमएस विभाजनईमेलमा एसएमएसएसएमएस विजेटआवाज प्रसारणआवाज मार्केटिंगआवाज मार्केटिंग प्लेटफर्मभ्वाइसमेल